Kismaayo News » Gidaarada Kismaayo
Kn: Qoraalada gidaarada lagu xardho iyo waliba afafka lagu qoro waa waxyaabo ka turjumaya wacyiga dadka, ilbaxnimadooda iyo waliba afkooda.
Magaalada Kismaayo, qoraalada darbiyada waxa uu hardan culus u dhaxeeyaa afafka Soomaaliga, Talyaaniga, Ingiriiska iyo Carabiga.
Waxaa si gaar ah noosoo jiitey qoraalada afka Talyaaniga ku qoran ee gidaarada iyo meheradaha ku qoran, kuwaasoo dhif iyo naadir ah, islamarkaasina meesha kasii baxaya.
Sida aad sawirada ka aragtaan qoraaladaasi talyaaniga ah waxaa ka mid ah Labaajo oo micnaheedu yahay meesha baabuurta lagu dhaqo, Nootaayo oo ah meesha arjiyada lagu qoro, Raayatooriiste oo ah halka biyo-heyska gaariga lagu farsameeyo, Goomiiste oo ah meesha lagu cilad bixiyo shaagaga baabuurta.
Dhamaan qalabka baabuurta intooda badan waa afka Talyaaniga, sida Kiyaawaha oo ah sheeyga loogu hadal heynta badanyahay meelaha baabuurta lagu cilad bixiyo.
Afka Soomaaliga meel tiro yar ayuuba ku qoranyahay, waxaadna moodeeysaa in meheradaha aanan loo heeynin magac bixin Af Soomaali ah, dadkuna ay durba fahmi ogyihiin magacyada luuqada Englishka.
Nin darbiyada wax ku qora oo magaciisa ka gaabsaday waxa uu sheegey in 85% darbiyada magacyada uu ku qoro uu yahay afka Englishka.
Xiligii ay Shabaabka magaalada ka talinayeen waxa aad ola dagaalameen afka Englishka, iyagoo meelo badan ka tirtirey, waxaanaba jirtey in Fu’aad Maxamed Shongole khudbad uu Kismaayo ka jeediyey wax yar ka hor maalmihii ay Kismaayo ka baxayeen Shabaabka uu ku sheegey in Afka Soomaaliga la’iskaba dhaafo, wixii hadda ka dambeeyana carabiga lagu hadlo.
Arrin kale oo suushey waa magacbixinta Soomaalida asal ahaan kasoo jeeda, dadku hadda waxa ay jecelyihiin in magacyada qalaad ay ula baxaan meheradaha, tusaale ahaan magaalo dal kale ku taala magaceed, halkii gabar ama neef geel ah magacyadooda loola bixi jirey waxa la jecelyahay.
Talyaaniga oo nus qarni hadda ka hor Soomaaliya xornimada ay ka qaadatay ayay wali saameyntiisa sii muuqaaa, mana ahan oo kaliya luuqada, ee dhismayaasha magaalada ugu nacfiga badan qaarkood waa kuwii uu ka tagay Talyaaniga.
Dad odayaal ah oo reer Kismaayo ah oo aan la sheekeysanay waxa ay noo sheegeen waxyaabaha ay ka xusuustaan ilbaxnimadii Talyaaniga laga dhaxlay, waxaa ka mid ah Foolyobaago (Qaansheeg Qaran) waa waraaqda daqliga dalka lagu qoro, Dubudaati (Xildhibaan), Gobarnatoore (Gudoomiye Gobol), Sindiko (Duqa Magaalada) iyo erayo kale oo badan.
Si kastaba ha ahaatee Gidaarada magaalada Kismaayo waxaa intooda badan ka muuqata dayac iyo saxartir la’aan, qaarkoodna 10 sano lama rinjiyeeynin, hadda intii bilo ah oo magaalada nabad lagu soo dabaalay ayaa waxaa la arkayaa gidaaro nuuraya, iyo dad rajo kusoo laabatay oo guryahooda rinjiyeysanaya.
Sawir Qaade : Cabdiqadar Sulub